Avy ao Strasbourg miaraka amin’ny fitiavana an’ireo Teny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2019 11:34 GMT
Suzanne eo amin'ny Skype avy any Strasbourg, Frantsa
Taorian'ny niasàna tao amin'ny orinasam-pianakaviany, asam-panjakana sy asa maimaimpoana, niverina tamin'izay tiany indrindra i Suzanne Lehn: ny fampiasana teny maro, ny vaovao ary ny Aterineto. Mpiara-mamoaka lahatsoratra amin'ny teny Frantsay ao amin'ny Global Voices izy.
Nisotro ronono rehzefa avy nanao asam-panjakana, naniry ny hamantatra momba ireo teny vahiny izy ary nianjera tato anatin'ny Global Voices. Tamin'io fotoana io indrindra, nitady mpandika teny ny GV ary dia nahafeno tanteraka ireo notakiana izy. Ho mpandika teny tao amin'ny GV Lingua Frantsay no nanombohany nanomboka ny Jolay 2008.
Hatreo, nandika lahatsoratra marobe avy tamin'ny teny Anglisy mankamin'ny teny Frantsay izy ary nanoratra lahatsoratra tamin'ny teny Frantsay sy teny Anglisy. Nandray anjara ihany koa izy tao amin'ny Global Voices Advocacy sy ny Rising Voices.
Na dia fantatra aza izy amin'ny maha olom-pirenen'izao tontolo izao azy, tao Strasbourg no nandaniany ny fiainany, tanàna nahaterahany. I Strasbourg, ilay renivohitr'i Alsace ao Frantsa, no tanàna fahasivy lehibe indrindra ao Frantsa. Mampiantrano sampandraharaha eoropeana marobe izy, tahaka ny Filankevitr'i Eoropa misy ny Vovnana Erantany ho an'ny Demokrasia, sy ampahany iray amin'ny Parlemantan'ny Fiombonambe Eoropeàna. Manome laza ho an'ilay tanàna ilay ivon-toerana manan–tantara sy tsara tarehy ao aminy, ny Nosy Lehibe, ivon-toerana voalohany voasokajy tanteraka ho Harem-bakoka Eran-tany ao amin'ny UNESCO. Malaza ihany koa i Strasbourg noho ireo tsenan'ny Noely ao aminy, ireo toerana fihinanam-bary ary ireo fisotrana divay sy labiera ao aminy.
Miaraka amin'ireo fiteny maro, fialambolin'i Suzanne ny fivezivezena. Natombony tamin'ireo boky novakiany ireo fivezivezena nataony. Fa manam-bintana izy manana ireo havany any amin'ireo toerana maro samihafa erantany ary izay no nanombohany ny tena fivezivezeny.
Ambarany fa ny nahazoany ireo fahalalàna momba ny GV sy ny aterineto amin'ny ankapobeny dia i Claire Ulrich, ilay tonian-dahatsoratry ny GV amin'ny teny Frantsay, izay nandray azy ho ao anatin'ity vondrom-piarahamonina feno olona mahafinaritra ity.
Tamin'ny firesahana tamiko teo amin'ny Skype, nambarany fa maro tamin'ireo nofinofiny no tanteraka noho ny fiarahana miasa amin'ny GV. Ary tantarainy daholo tsy mihambahamba izany ao anatin'ilay tafatafany tamin'i Marie Bohner, volana vitsivitsy lasa izay.
Misaotra anao Suzanne nahafoy fotoana fa tena loharanon'aingam-panahy ho an'ireo mpiara-miasa rehetra ato amin'ny GV ianao !
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 18 ora izay